Kpụrụ omume | Ntụziaka esi nri | Ntụziaka nri
Christmas Ezi ntụziaka
Ntughari na nghọta.
Iwu ederede anyị dabere na isi asaa nke na-ahụ na ọdịnaya anyị niile ga-abụ nke siri ike, eziokwu, ntụkwasị obi na nghọta.
Anyị chọrọ ka ọ dịrị gị mfe ịma onye na ede ihe di gburugburu anyi na ihe omuma ị ga-eme ya.
Anyị chọrọ ka ị mata isi mmalite anyị, onye anyị sitere n'ike mmụọ nsọ na ihe anyị na-eji na ngwaọrụ.
Anyị na-arụ ọrụ iji mee ka ihe a niile kwe omume site n’inye ndị na-agụ akwụkwọ ohere ịme ka ha gwa anyị gbasara njehie ọ bụla ha hụrụ na mmelite ọ bụla ha chọrọ ịtụnye.
Na ịntanetị nke nwere ọrịa ịxicụbiga mmanya ókè, ọ dị mkpa ka ị nwee ike ịmata ọdịiche dị n'etiti mgbasa ozi a pụrụ ịtụkwasị obi na nke a na-apụghị ịdabere na ya.
Anyị dabere ụkpụrụ omume anyị na isiokwu 7, nke anyị ga-emepe n'okpuru:
Okwenye nke ozi a
Ozi niile anyị na-ebipụta nyochara iji hụ na ọ bụ eziokwu. Iji mezuo ebumnuche a, anyị na-anwa idepụta onwe anyị site na isi mmalite, nke bụ isi akụkọ, wee si otú ahụ zere nghọtahie ma ọ bụ nkọwa na-ezighi ezi nke ozi ahụ.
Anyị enweghị mmasị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ nke azụmahịa ọ bụla ma anyị na-ede site na nnọpụiche, na-anwa ịbụ dị ka ebumnobi dị ka o kwere mee mgbe ị na-enyefe akụkọ ma nye anyị nka anyị na nyocha ngwaahịa na atụnyere.
Ndị editọ pụrụ iche
Onye editọ ọ bụla maara nke ọma isiokwu na-arụ ọrụ. Anyị na-emeso ndị ọkachamara n'akụkụ ọ bụla. Ndi mmadu na egosiputa kwa ubochi inwe oke ihe omuma banyere ihe ha dere banyere ya. Ka ị nwee ike mata ha, anyị na-ahapụ ozi gbasara ha yana njikọta na profaịlụ mmekọrịta ha na akụkọ ndụ ha.
Ihe omimi nke mbu
Ihe niile anyị bipụtara bụ nke mbụ. Anyị anaghị edepụta ma ọ bụ sụgharịa site na mgbasa ozi ọzọ. Anyị na-ejikọta isi mmalite ndị kwekọrọ na ya ma ọ bụrụ na anyị ejirila ha, anyị wee kwuo ndị nwe onyonyo, mgbasa ozi na akụrụngwa anyị ji enye ozi kachasị zie ezie, na-ekwu na ikike dị mkpa.
Emela ka Pịabait
Anyị anaghị eji akụkọ ụgha ma ọ bụ nke na-akpali akpali iji dọta onye na-agụ ya n’enweghi ozi ọma ọ bụla. Anyị na-akwụwa aka ọtọ ma na-ekwu eziokwu, ya mere isiokwu nke isiokwu anyị kwekọrọ na ihe ị ga-ahụ na ọdịnaya anyị. Anyị anaghị ewepụta atụmanya banyere ọdịnaya na-adịghị na ahụ akụkọ.
Ogo na ịdị mma nke ọdịnaya
Anyị na-emepụta isiokwu dị mma na ọdịnaya yana anyị na-achọ ịdị mma n'ime ya. Na-anwa ilekọta ihe niile ma mee ka onye na-agụ ya dịkwuo nso na ozi ha na-achọ na mkpa.
Mgbe obula anyi huru mmehie ma obu gwa anyi ya, anyị na-enyocha ma mezie ya. Anyị nwere sistemụ nchịkwa nke ime n'ime anyị nke na-enyere anyị aka ịme ka isiokwu anyị zuo oke oge niile, yana igbochi ha ịme ọzọ n'ọdịnihu.
Na-aga n'ihu mma
Anyị na-emezi ọdịnaya anyị na saịtị anyị mgbe niile. N'otu aka, na-agbazi njehie na, n'aka nke ọzọ, ịgbasa nkuzi na enweghi ọdịnaya. N'ihi omume a, ọdịnaya niile nke webs na-agbanwe ka ọ bụrụ ntụaka na ọdịnaya bara uru maka ndị niile na-agụ ya, oge ọ bụla a na-agụ ha.
Ọ bụrụ na ị nwere mkpesa ma ọ bụ aro ọ bụla ị ga-eme banyere edemede ma ọ bụ onye edemede, anyị na-akpọ gị ka ị jiri nke anyị mpempe kọntaktị.
Ntụziaka na email gị
Ezi ntụziaka niile na email gị
Ezi ntụziaka Mycook
Na-ahụ n'anya Thermo